IHVH - Wikipedia
Ny litera efatra IHVH na YHWH dia litera nenti-manoratra amin'ny tarehin-tsoratra latina ny anaran'ny andriamanitr'i Israely hoe יהוה araka ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly.
Ny fanononana ny teny asehon'ny renisoratra hebreo יהוה ao amin'ny Baiboly hebreo (na Tanakh) izay soratana amin'ny litera latina hoe IHVH dia tsy fantatra mazava, hoy ny mpino ao amin'ny jodaisma sy ny mpikaroka momba ny B
aiboly sy momba ny teny hebreo maro.
Tao amin'ny tempoly jiosy dia lasa fanao ny tsy manonona ny anaran' Andriamanitra mba ho fanajana azy. Nanomboka tokony tamin'ny vanimpotoan'ny fahababoana izany. Matetika dia nosoloana ny teny hoe Adonay (hebreo: אֲדֹנָי), izay midika hoe "Tompo", ilay anarana rehefa mamaky teny na miresaka ny amin'Andriamanitra ny Jiosy.
Mba hampahatsiahivana ny mpamaky ny fanoloana ny יהוה Ihvh amin'ny hoe Adonay dia nasisika ny marika manambara ny zanapeo ao amin'io teny io ka nahazoana ny hoe Iahovah (Yahowah) na Iehovah (Yehowah). Avy amin'io hoe Iehovah na Yehowah izay natao ho fampahatsiahivana ny hoe Adonay io ny hoe Jehovah hita ao amin'ny fandikana ny Baiboly sasany toy ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy. Efa tany amin'ny taonjato faha-19 no nanomboka ny tsy fampiasan'ny mpandika teny maro ny hoe Jehovah taorian'ny fikarohana momba ny teny hebreo nataon'ilay manam-pahaizana alemàna atao hoe Wilhelm Gesenius.
Ny hevitry ny anarana hoe יהוה dia notsoahan'ny mpanao heviteny amin'izay voalaza ao amin'ny Eksodosy (Eks. 3.13-14).
Izao no navalin'Andriamanitra an'i Mosesy raha nanontany azy ny anarany izy: אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה / Ehieh Asher Ehieh. Ny hoe IHVH izany dia avy amin'ny matoanteny hoe אֶֽהְיֶ֖ה / ehieh. Izany dia manambara ny fisian' Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra na ny fampisiany ny zavatra rehetra. Ny hoe ehieh dia endriky ny matoanteny היה / hih miaraka amin'ny mpisolotena voalohany (malagasy: "aho, izaho") amin'ny fanehoan-javatra tsy efa, izay midika hoe "misy", "manjary", "mampisy" na "mampanjary". Azo ilazana ny ankehitriny sy ny hoavy io endriky ny matoanteny io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=IHVH&oldid=997048"
Dernière modification le 15 Septambra 2020, à 04:47
Voaova farany tamin'ny 15 Septambra 2020 amin'ny 04:47 ity pejy ity.